Olymp Trade တွင် Alligator Indicator ကို လွယ်ကူစေရန် ဤလမ်းညွှန်ချက်ကို ဖတ်ပါ။
အိမ်ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာOlymp Trade တွင် Alligator Indicator ကို လွယ်ကူစေရန် ဤလမ်းညွှန်ချက်ကို ဖတ်ပါ။
ဧပြီလ 1 ရက် 2022 ခုနှစ်
(နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့- ဧပြီလ 1 ရက်၊ 2022)
Alligator Indicator သည် ခေတ်ရေစီးကြောင်း အညွှန်းကိန်းများ၏ ရေပန်းအစားဆုံး မိသားစုဝင်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအညွှန်းကိန်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဘီလ်ဝီလျံ. သင်ဤညွှန်ပြချက်မှာလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။ Olymp Trade သရုပ်ပြနှင့် အကောင့်အစစ်.
Olymp Trade တွင် Alligator Indicator ဖြင့် စတင်သည်။
နှစ်ခုလုံးတွင် ညွှန်ကိန်းဖြင့် စတင်နိုင်သည်။ Olymp Trade အစစ်အမှန်နှင့်သရုပ်ပြအကောင့်. ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက သင့်အကောင့်ထဲကို ဝင်ပါ။ အကောင့်. ညွှန်ပြချက်အကွက်ကို နှိပ်ပါ => Next ကို နှိပ်ပြီး လူကြိုက်များသည့် တက်ဘ်ကို နှိပ်ပါ => Search ကို ရွေးချယ်ပါ။ Williams မိကျောင်း စာရင်းထဲမှ
Alligator ညွှန်ပြချက်သည် ကုန်သည်များအား ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော လမ်းကြောင်းများ သို့မဟုတ် ပြောင်းပြန်လှန်မှုများကို ခန့်မှန်းရန် ကူညီပေးသည့် လမ်းကြောင်းသစ်ညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤညွှန်ကိန်းကို 1995 ခုနှစ်တွင် အကြီးကျယ်ဆုံးသော ကုန်သည်များနှင့် လေ့လာသုံးသပ်သူ Bill Williams မှ တီထွင်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပြီးနောက် ဤညွှန်ကိန်းကို သူတီထွင်ခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့ သုတေသနပြုချက်အရ စျေးကွက်ဟာ မိကျောင်းတစ်ကောင်လို အတိအကျအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီတိရစ္ဆာန်အကြောင်း နည်းနည်းသိရင် မိကျောင်းတစ်ကောင်သည် အိပ်ချိန်၏ 70% ကို အသုံးချပြီး ကျန် 30% ကို သူနိုးလာချိန်ဖြစ်သည်။
Alligator Indicator ကိုဖတ်နည်း
ညွှန်ပြချက်အား ရိုးရှင်းသောရွေ့လျားနေသော ပျမ်းမျှမျဉ်းကြောင်းသုံးခုမှ မေးရိုး၊ သွားများ၊ နှုတ်ခမ်းများ။ ဤတွင်၊ The Jaw သည် 13 SMA နှင့် 8 bar တို့မှ ပြုလုပ်ထားသော အပြာရောင်မျဉ်းဖြစ်သည်။ သွားများသည် 8 SMA နှင့်5bars တို့မှ ပြုလုပ်ထားသည့် အနီရောင်မျဉ်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့5SMA နဲ့3bars နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အစိမ်းရောင်နှုတ်ခမ်းပါ။ ဤတွင်၊ နှုတ်ခမ်းသည် အမြန်ဆုံးမျဉ်းဖြစ်ပြီး မေးရိုးသည် အနှေးဆုံးဖြစ်သည်။ ဝယ်ရောင်း အချက်ပြမှုများကို ဖန်တီးပေးသော စျေးနှုန်းပတ်ပတ်လည်တွင် ဤဖဲကြိုးသုံးလိုင်း။
သုံးခုက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ အပြာရောင်နောက်မှာ အနီရောင်မျဉ်းနဲ့ အစိမ်းရောင်မျဉ်းကြောင်းကို တွေ့ရမှာပါ။ ဤသည်မှာ အဆင်းလမ်းကြောင်းအတွက် စံပြမြင်ကွင်းဖြစ်သည်။ ဤလိုင်းများကြားတွင် ကြီးမားသော ကွာဟချက်ရှိလျှင် ဤလမ်းကြောင်းသည် ပို၍ပင်အားကောင်းမည်ဟု ယူဆပါလိမ့်မည်။
မျဉ်းသုံးကြောင်းသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဖြတ်သွားသောအခါတွင် အနီရောင်မျဉ်းကြောင်းအတိုင်း ထိပ်တွင် အစိမ်းရောင်မျဉ်းကြောင်းနှင့် အပြာရောင်မျဉ်းကြောင်းကို တွေ့ရှိပါက ကျဆင်းနေသောလမ်းကြောင်းအတွက် စံပြမြင်ကွင်းဖြစ်သည်။ ဤစာကြောင်းသုံးကြောင်းကြား ကွာဟချက်ကြီးကြီးမားမားရှိလျှင် ပို၍ပင် အားကောင်းနိုင်သည်။
ဤညွှန်ပြချက်နှင့် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် မည်မျှလွယ်ကူကြောင်းနှင့် ဤညွှန်ကိန်းသည် မည်မျှအစွမ်းထက်ကြောင်းကို ယခုအချိန်မှ သင်နားလည်သွားပါပြီ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိရန် လမ်းကြောင်းအတည်ပြုကိရိယာကို သင်သုံးနိုင်သည်။ Olymp Trade သရုပ်ပြအကောင့်တွင် လမ်းကြောင်းအတည်ပြုချက်အတွက် ဤအညွှန်းကိန်းကို အခြားအညွှန်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ပေါင်းစပ်အလုပ်လုပ်ပုံကို စစ်ဆေးရန် အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ မှန်ကန်သောအတည်ပြုပေးသူညွှန်ကိန်းကိုရှာဖွေရာတွင် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာကြုံတွေ့ရပါက မှတ်ချက်ပေးရန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ငါမင်းကိုကူညီမယ်။ ဒီ့ထက်မက အကောင်းဆုံးနဲ့ အောင်မြင်တဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ် 🙂
Olymp Trade တွင် Alligator Indicator
Bill Williams ကုန်သည်
Williams သည် မိကျောင်း ညွှန်ပြသည်။
ယခင်ဆောင်းပါးOlymp Trade တွင် Moonch Index ဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် လေ့လာပါ။
နောက်ဆောင်းပါးOlymp Trade တွင် Vip အကောင့်ကို ရယူခြင်းဖြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကုန်သည်တစ်ဦး ဖြစ်လာပါ။
အချက်ပြမှုများဖြင့် ကုန်သွယ်မှုသည် Olymp Trade တွင် အရောင်းအ၀ယ်ကောင်းအချို့ကို အမှတ်ရရန် အလွယ်ကူဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်လည်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်...
ဧပြီလ 20 ရက်၊ 2022 ခုနှစ်
Olymp Trade တွင် Vip အကောင့်ကို ရယူခြင်းဖြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကုန်သည်တစ်ဦး ဖြစ်လာပါ။
Olymp Trade Vip အကောင့် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် Olymp Trade သည် ကုန်သည်များ အဆောက်အဦများနှင့် ကုန်သွယ်မှု အတွေ့အကြုံများကို ရရှိသည့် အခြေခံအားဖြင့် အဆင့်ဆင့်ကုန်သွယ်မှုစနစ်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။ အဲဒါ...
Subhamcare ၃ - ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၂၂
Subhamcare ၃ - ဧပြီလ 20 ရက်၊ 2022 ခုနှစ်